အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ကစားဟန်မျိုးနဲ့ . . . . မီလန် ဒါဘီ ပြန်လာခဲ့လေပြီ - Sports Myanmar
February 10, 2020 - by Editor
ဒါဘီ ပွဲ ဆိုတာ က မြို့ခံ အသင်း ၂ သင်း ၊ ဒေသခံ အသင်း ၂ သင်း ရင်ဆိုင်တွေ့ ဆုံတဲ့ ပွဲတွေ ကို ခေါ်ဝေါ် လေ့ ရှိကြတာ ဖြစ်ပြီး အချို့ ပွဲစဉ်တွေ ကိုတော့ အသင်းတွေ ရဲ့ အကြားက အားပြိုင်မှု တွေ ကြီးမားလွန်း တာ ကြောင့် အင်္ဂလန် ဒါဘီ ၊ အီတလီ ဒါဘီ ၊ စပိန် ဒါဘီ ၊ ဂျာမန် ဒါဘီ ဆိုပြီး ခေါ်ဆို လေ့ ရှိကြပါတယ် ။ မြို့ တစ်မြို့တည်း ၊ ဒေသ တစ်ခုတည်း တည်ထောင် ထားတာ နဲ့ ဒီ အသင်းတွေ ဆုံတွေ့မှု ကို ဒါဘီ ပွဲ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ် လို့ မရ ပါဘူး ။
စစ်မှန်တဲ့ ဒါဘီ ပွဲတွေ ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိကြပါတယ် ။ အသင်း ၂ သင်း အကြားက မုန်းတီးမှု တွေ ဟာ မြက်ခင်းပြင် တွေ ပေါ်က စတင် ခဲ့တာ ချည်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ တစ်ခါ တရံ မှာ နိုင်ငံရေး ၊ တစ်ခါ တလေ မှာ စီးပွားရေး နဲ့ လူမှုရေး ကိစ္စတွေ ဟာ ဒါဘီ ပွဲစဉ်တွေ ရဲ့ ပြင်းထန်မှု ကို လောင်စာပျိုးပေး ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒီလို အနှစ်နှစ် အလလ မုန်းတီး စက်ဆုပ်မှုတွေ ဟာ မြက်ခင်းပြင် ပေါ် ကို နင်းချ မိချိန် မှာတော့ မိနစ် ၉၀ ကြာတဲ့ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ကျော်ကြားတဲ့ ဒါဘီ ပွဲတွေ ရှိကြ ပါတယ် ။ ဒီပွဲတွေ အားလုံး ဟာ အကျိတ် အနယ် ရှိရုံသာမက ပါဘူး ၊ သွေးတွေ ချွေးတွေ ၊ အော်ဟစ် ကြိမ်းမောင်း ဆဲဆိုသံတွေ ၊ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုတွေ ၊ မီးခိုးတွေ ၊ မီးပန်းတွေ ၊ စာတမ်းတွေ ၊ ဆေးရောင်ခြယ်မှုန်းမှုတွေ နဲ့ တကယ့် ကို ရူးသွပ် နေကြတဲ့ မနုသာ လူအုပ်ကြီး ၂ ခု ရဲ့ တိုက်ပွဲ တစ်ပွဲ လို့ ဆိုရရင် အမှန်ဆုံး ဖြစ်မှာပါ ။
ဒီအထဲ မှာတော့ မီလန် ဒါဘီ က အကျော်ကြားဆုံး စာရင်း ဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ မီလန် ဒါဘီ ဆိုတာ ကတော့ အီတလီ နိုင်ငံ မီလန်မြို့ မှာ အခြေစိုက်တဲ့ အေစီ မီလန် နဲ့ အင်တာ မီလန် အသင်းတို့ အကြားက အားပြိုင်မှု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် ဒါဘီ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ သင်း ဟာ တစ်မြို့တည်း ရှိရုံသာ မက ပါဘူး . . . ကစားတဲ့ ကွင်းကလည်း တစ်ကွင်းတည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အခု အကြောင်းကို မပြောခင် မှာ မီလန်ဒါဘီ ရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်လည် တင်ပြ မှသာ အချိတ်အဆက် မိ နိုင်မယ်လို့ ယူဆ မိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းထဲ ကို ခဏလောက် အလည် သွားကြည့်လိုက် ကြရအောင် . . .
ကနဦး အစတုန်းက အေစီမီလန် တစ်သင်းတည်း ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ၁၈၉၉ ခုနှစ် မှာ အဲဖရက် အက်ဒဝပ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ မီလန် ခရစ်ကတ် နဲ့ ဘောလုံး အသင်း ကို စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါတယ် ။ ၁ နှစ် အကြာမှာ ပထမဆုံး ဖလား ကို ဆွတ်ခူး ခဲ့ပြီး ၁၉၀၈ ခုနှစ် အတိုင်ခင် အထိ အမှတ်ပေး ဖလား ၃ လုံးကို ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
၁၉၀၈ ခုနှစ် မှာတော့ အေစီ မီလန် အသင်းရဲ့ အကြီးပိုင်းထဲ မှာ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။ အီတလီ ပြည်တွင်း ကစား သမားတွေ ကို အခြေခံ ပြီး လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် အကျိုးပြု စေမယ့် အသင်းကို တည်ဆောက်လိုသူတွေ နဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကစား သမားတွေကို ခေါ်ယူပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ကို ပြုလုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို သဘောထား ကွဲလွဲမှုရဲ့ အကျိုးဆက် ကတော့ နီနက်ကြား ဝတ်ဆင် တဲ့ အေစီမီလန် အသင်း ကနေ ပြာနက်ကြား ဂျာစီ ကို ဝတ်ဆင် မယ့် အင်တာမီလန် ဆိုတဲ့ အသင်း ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရတာပါပဲ ။ အသင်း ကွဲသွား ခဲ့ ပေမယ့်လည်း အင်တာ မီလန် အကြီးအကဲတွေ ဟာ ဆန်စီရို ကွင်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင် ခွင့် ရနေသေး တာကြောင့် မီလန် ၂ သင်း စလုံးဟာ ခမ်းနားတဲ့ ဒီကွင်းကြီး ကို အတူတကွ သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီ အသင်း ၂ သင်း ဟာ စတား ကစားပေါင်း များစွာ နဲ့ အီတလီ ရဲ့ အခမ်းနားဆုံး ဒါဘီ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ အေစီမီလန် က ပြည်တွင်း အခြေစိုက် အကျော် အမော်တွေ ကို ဥိးစားပေးခဲ့ သလို အင်တာ ကလည်း ဥရောပ နဲ့ တောင်အမေရိက က နာမည်ကျော် ကစား သမားတွေကို ခေါ်ယူကာ အေစီမီလန် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို အားကောင်းလှတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ဟာ အေစီမီလန် ရဲ့ ရွှေရောင်ခေတ် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှာ စတင်ပြီး အရှိန် အဟုန် လျော့ကျ လာခဲ့ ပါတယ် ။ လုပ်ပွဲ အရှုပ်တော်ပုံတွေ ကြောင့် အေစီတို့ တန်းဆင်း ရ အပြီးမှာတော့ မီလန် ဒါဘီ ဟာ အရောင်အဝါတွေ မှေးမှိန် ခဲ့ရပြီး ဆွဲဆောင်မှု ကင်းမဲ့လာခဲ့တာ ယခု အချိန်အထိ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယမန်နေ့ က ကစားခဲ့တဲ့ မီလန် ဒါဘီ ကတော့ ပရိသတ်တွေ ကို စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့် ပေးစွမ်းခဲ့ ပါတယ် ။ အရင်တုန်းက လို ပြင်းထန်မှုမျိုး မရှိသေးပေမယ့် ၂ သင်း စလုံး အပြန် အလှန် ကစားခဲ့ သလို ရလဒ် တွေ ကလည်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြည့် ပေးစွမ်းခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး မှာတော့ မီလန် ဒါဘီ ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီ လို့ ဆိုရမှာပါ ။
ဒီတစ်ခါ မီလန် ဒါဘီ ဟာ အကျိတ် အနယ် ရှိခဲ့ရုံသာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နာမည်ကျော် တွေ နဲ့လည်း ပြည့်နှက် ခဲ့ ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် အေစီ ကို တစ်ကျော့ပြန် ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဖော်တွေ ဖြစ်တဲ့ အလက်ဆစ်ဆန်းချက် ( အတူ တွဲ မကစားခဲ့ရ ) ၊ လူကာကူ နဲ့ အက်ရှ်လေယန်း တို့ နဲ့ ပြန်လည် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါက အင်္ဂလန် ပရိသတ်တွေ ကို မီလန်ဒါဘီဆီ အာရုံရောက်ဖို့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက် ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
နည်းပြ ၂ ဦး ( ကွန်တီ နဲ့ ပီယိုလီ ) ဟာ အီတလီသားတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ၂ သင်း စလုံး ဟာ အင်္ဂလိပ် အသင်းတွေလို အမြန်ပေး ၊ အဝေးဘောတွေ နဲ့ ကစားခဲ့ သလို တွန်းတိုက်မှုတွေ ၊ ဖြတ်ထုတ် ကာကွယ်မှုတွေ ကလည်း အင်္ဂလိပ် ကစားနည်းဆန်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကွန်တီ ရဲ့ အင်တာ မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစား သမားတွေ ပါနေတာကြောင့်လို့ ပြောလို့ရ ပေမယ့် ပီယိုလီ ရဲ့ အေစီ မီလန် ကပါ ဒီလို ကစားခဲ့တာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ ။
မီလန် ဟာ ဦးဆောင်ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ့ ပထမ ပိုင်း ရဲ့ ဘုရင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ကျသွား ခဲ့ပြီး အင်တာ ရဲ့ သွင်းဂိုး ၄ ဂိုးကို ခွင့်ပြု ခဲ့ရကာ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အင်တာ ကတော့ စနေနေ့ က ရှုံးသွားတဲ့ ယူဗင်တပ် ကို လိုက်မီ သွားခဲ့ပြီး အဆင့် ၁ နေရာကိုပင် ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေ ကတော့ မီလန် ဒါဘီ ကို တက်ကြွ တဲ့ ပုံစံ နဲ့ မြင်တွေ့ ရလို့ ကျေနပ် ခဲ့ကြမှာ သေချာပါတယ် . . .